Ra’iisul wasaare Kheyre “Waxaan idiin sidaa hadiyad taasoo ah warqad aan berri usoo qorayo guddoomiyaha gobolka” – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre “Waxaan idiin sidaa hadiyad taasoo ah warqad aan berri usoo qorayo guddoomiyaha gobolka”
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xalay ka qeybgalay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayey maalinta dhalinyarada adduunka oo ay soo qabanqaabisay wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Xafladan ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiiro ay ka mid ahaayeen wasiirka dhalinyarada & ciyaaraha, xildhibaano, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, dhalinyaro iyo marti sharaf kale.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa yiri “Waxaa lasoo dhaafay waqtigii aad abuuri laheydeen mirihii aad beeran laheydeen mustaqbalka. Madaxda Qaranka waxey diyaar u tahay inaad doorkiina hoggaamineed qaadataan. Waa dhammaatay waqtigii aad dhexdhexaad noqon laheydeen, mana ka noqon kartiin dhexdhexaad hooyadiin oo dhibaateysan, dhalinyaradii ay baaagamuundo yihiih. Ma noqon kartaan dhexdhexaad oo dalkaaga iyo gurigaaga waa mustaqbalkaaga.”
Ra’iisul wasaaraha oo ka hadlayey dhibta Tahriibka ayaa yiri “Markii aan da’diina ahaa ayaan caasi ka raacay Muqdisho oon ku tagey Baraawe oo aan ka raacay dooni aan garaneynin meesha ay u socoto oo ay mararka qaar nala qalibmi gaartay, si kasto oo aad dalka uga dhooftaan waxaad ku soo noqoneysaan dalkiinii hooyo.”
Mudane Kheyre ayaa tilmaamay in waxa yar ee la haysto ay u maamuli doonto dawladdu si cadaalad ah, qof kasta oo shaqo soo dalbadana lagu xulandoon kartidiisa, aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa.